'ဂီတနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အားမရတာလည်း ရှိတယ်'' တေးသံရှင်/သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွ?? - Yangon Media Group
‘ဂီတနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အားမရတာလည်း ရှိတယ်” တေးသံရှင်/သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွ??
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၄- ‘မြေပဲယို’ တေးဂီတအဖွဲ့ဝင်များ တေးသီချင်းခွေ ထွက်ရှိရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရာတွင် ကြန့်ကြာနေမှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့ မြေပဲယိုအဖွဲ့မှ တေးသံရှင်၊ သရုပ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်းက အခုလိုပဲ ပြောပြခဲ့ပါ တယ်။
”မြေပဲယိုအဖွဲ့ စုပေါင်းပြီးတော့ တေးသီချင်းခွေထုတ်ဖို့ဆိုတာက ကျွန်တော် က ဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အားမရတာလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီ အခါကျတော့ အချိန်သေချာယူပြီးတော့ လုပ်ရတယ်။ တစ်ခွေတစ်ခွေကို အားရ ကျေနပ်ဖို့အတွက် အရမ်းကို အချိန်ယူပြီးတော့ လုပ်ရတာ။ ဂီတက ဝါသနာပါ လို့သာ လုပ်နေတာ။ ကျွန်တော်ရဲ့ တကယ်တမ်း ပရောဖက်ရှင်နယ်အလုပ်က သရုပ်ဆောင် အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့အတွက် ပြေး ပြီးတော့ လုပ်နေရတာလည်းရှိတယ်။ အဲဒါတွေကြောင့် အခွေထွက်ဖို့က အချိန် ကြာနေတာပါ။ အဲဒါကြောင့် ပရိသတ်တွေ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်ပေးကြပါဦး”လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိတွင် သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွန်းသည် ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများ ကို လက်ခံရိုက်ကူးနေပြီး နှင်းဆီအငြိမ့်အဖွဲ့နှင့်လည်း အငြိမ့်ဖျော်ဖြေပွဲများ ကပြ ဖျော်ဖြေလျက် ရှိနေပါတယ်။
”နှင်းဆီအဖွဲ့နဲ့ကတော့ ဒီဇင်ဘာတုန်းက တော်ဝင်မှာ တစ်ခါ ကပြခဲ့တယ်။နောက်ထပ်ပြီးတော့ နှင်းဆီအဖွဲ့ရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲအကြီးအနေနဲ့ကတော့ မကြာခင် လုပ်မှာပါ။ အဲဒီဖျော်ဖြေပွဲကတော့ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသဖို့လည်း ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း အဲဒီဖျော်ဖြေပွဲအတွက် တတ်နိုင်သမျှ အချိန်လေးတွေ ဖဲ့ပြီး တော့ ပြက်လုံးလေးတွေ တိုက်နေပါတယ်။ အားပေးကြပါဦးလို့”ဟုလည်း သရုပ် ဆောင် မင်းမော်ကွန်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။
Infinite မှ လီဆောင်ဂျုန်းနဲ့ ဂျန်ယီးရန်တို့ SBS ရဲ့ ဒရာမာရုပ်ရှင်တွင် အတူသရုပ်ဆောင်ထားဟုဆို